Ukuphefumlelwa ngoMgqibelo | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 3, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Unyana wam, ityala, ikhokelela kwimveliso yesandi ngokusebenza kwesikolo sakhe esiphakamileyo seWizard yeOz. Intombi yam nayo iya kuba kuyo, idlala enye yeemunchkin. UKatie sele efumana uphononongo lwabantu abadlala ... upholile ngenene kuba ukwisikolo esiPhakathi kuphela! Kwakunolwazelelo kuye nokuba akwazi ukuya kudlala. Uyayithanda ngokupheleleyo, nangona. Ndihlala ndimangalisiwe kwitalente yabantwana bam bobabini.
Njengoko unokuthelekelela, iintsuku zam nobusuku ngoku zigcwele iingoma ezivela kwiWizard yeOz. Unyana wam ubhale ngokutsha "Ukuba bendinentliziyo kuphela" kuhlobo lwamva lwe-acoustic. Khange ayenze ngaphandle kwekhaya, nangona kunjalo. Ndifuna ukumkhuthaza kancinci ukuba athathe nje ikatala kwaye ayidlale ngexesha lekhefu xa uziqhelisa namhlanje.
Xa ndabona le vidiyo ngo-3R.e.Phakathi, ndambonisa yona kwaye yamkhuthaza ukuba azise ikatala yakhe kulwenziwo namhlanje. Unyana wam akanangxaki ukonwabisa isihlwele… kodwa hayi isihlwele esingazi ukuba kuza ntoni. Khawufane ucinge xa ​​usenza kaloliwe waseParis! Yile nto yenziwe ngaba bantu banetalente emangalisayo:
Mhlawumbi oku kuyakukhuthaza! Yaphefumlela unyana wam!
I-PS: Ngobusuku bokugqibela bendinabo ityala Ukuqesha I-Wiz ke sinokufumana utshintsho kwisantya. 😉
Ndangcwatywa njani nguDigg (Impazamo yam)
Mar 3, 2007 ngo 1:26 PM
Andina talente yomculo kodwa bendihlala ndifuna ukungena endaweni ndize ndimkhuphele ngaphandle umama, ndicime uQuincy Jones, ndicothisa ukujonga oku, cinga nje ngoDoug, inokuba nguwe, mna noChris sihla EL eChicago, masizame. umbono olunge ngakumbi, wena noChris niyizame kwaye ndiza kubamba i-viedo cam! umsebenzi omhle kakhulu
Mar 4, 2007 ngo-10: 56 AM
Ndikunye nawe kulowo, JD! Ndiyakwazi ukuphatha inqaku kwaye bendihlala ndikwazi ukudanisa malunga ne-100 lbs eyadlulayo. Ndihlala ndimxelela unyana wam xa esisityebi kwaye edumile ukuba ndiza kucula ingoma nokuba inye naye eqongeni.
Ndicinga ukuba ukhathazekile. 🙂
Mar 3, 2007 ngo 4:56 PM
I-nonpoint ine-rock version enkulu yokuziva (emoyeni namhlanje ebusuku) nayo.
Mar 4, 2007 ngo 7:20 PM
Uxolo, ibingumzila ofihliweyo xa kukhutshwa i-Mushroomhead
Mar 4, 2007 ngo 7:28 PM
Yeyiphi icwecwe ebelikuyo? Unyana wam wayethanda iMushroomhead. Ndingumlandeli weSlipKnot mna… ngakumbi kwezithuthi kwaye ndingathanda ukukhupha umsindo wam. Nokuba loo nto okanye i-Notorious BIG (ndimamela yonke into!).
Mar 3, 2007 ngo 9:49 PM
Hayi-ndilithandile iqela. Enkosi ngokwabelana ngayo. Yonke enye into isahamba phezu kwentloko yam! (ps. Ndifuna ukuxelela uMike ukuba afumane izinto ezininzi kwindawo yakhe!)